Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Otu esi echekwa obodo nta na njem nlegharị anya tii
Oghere tii ahụ yiri nnukwu steepụ na-egbukepụ egbukepụ, na-enwu n'okpuru oke anwụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, ka osisi tii na-acha akwụkwọ ndụ na-achọ mma na-epulite ome dị nro na obodo Liubao na ngwụsị October.
Ọ bụ ozugbo mgbada Frost, 18th nke 24 nke usoro anyanwụ, dara na Ọkt 23. Ndị obodo nọ na-arụsi ọrụ ike iwere akwụkwọ. Nke a bụ oge dị mma maka ememe ahụ. A na-ewere na-esi ísì ụtọ nke akwụkwọ ahụ dị ka nke kachasị mma n'ihi ọdịiche okpomọkụ dị n'etiti ehihie na abalị n'oge a n'afọ na obere mmiri ozuzo.
Ọ bụghị naanị ndị ọrụ ugbo nọ na-agbachi n'etiti osisi, mana ndị ọbịa na-enyocha ọmarịcha ime obodo dị na Cangwu County, Wuzhou, mpaghara Guangxi Zhuang kwụụrụ onwe ya.
Ndị ọbịa a na-ebutekarị mmetụta nke ọrụ n'obodo a na-adịkarị jụụ n'ọnwa Ọktoba, dịka ndị isi obodo siri kwuo. Ọtụtụ n’ime ha na-eme ihe ndị obodo ahụ na-eme: buru nkata achara n’ubu ma were akwụkwọ tii. Dị ka o kwesịrị ịdị, ha na-ese foto n'akụkụ mbara ala ndị na-arị elu na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ.
N'ọgwụgwụ nke ụbọchị ahụ, ndị njem nwere ike iji tii na-eme onwe ha ume ọhụrụ, na-amụta ighe na ịtụgharị akwụkwọ ndị ahụ n'ụzọ ochie, ebe ísìsì na-esi na ite ndị a kpụ ọkụ n'ọnụ na-asọba n'ikuku.
Kosima Weber Liu, onye si Jamanị gara n'obodo ahụ n'October ma tii ebe ahụ masịrị ya, ọkachasị mmetụta ọgwụgwọ ya.
Liu kwuru, sị: “Ọ bụ naanị mgbe m nụrụ banyere usoro ịsa tii ka m nụrụ, ma amụtara m otú ọ dị ka ịsa tii n'onwe m.
O nwere nghọta ka mma maka usoro na emume gbara ya gburugburu.
"Ọ dị m ka m gara ebe pụrụ iche, ihe omimi na China."
Amara obodo Liubao maka tii gbara ọchịchịrị nke, kemgbe afọ 1,500, bụ ihe na-esi ísì ụtọ. O nwere ọnọdụ dị mma maka imepụta tii, yana oke iru mmiri, anwụ anwụ, ala na elu, ihe dị ka mita 600 n'elu oke osimiri, nke fọrọ nke nta ka ọ dị mma ịbụ eziokwu.
A na-ewere tii Liubao dị ka otu n'ime ndị kasị mma na mba ahụ ma na-enye ya ụtụ maka Emperor Jiaqing n'oge Ọchịchị Qing (1644-1911).
A na-ejikwa ya dị ka ọgwụ ahịhịa iji gbochie ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri mgbe ndị China kwagara Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ngwụsị narị afọ nke 19.
Enwere ike imepụta tii Liubao site na mmiri ruo ọdịda. Ọ bụ ezie na a na-ewere akwụkwọ ndị sitere na mmalite oge opupu ihe ubi dị ka ihe kachasị dị nro ma si otú a dị elu, ha na-ebu ekpomeekpo pụrụ iche mgbe a na-egbute ya na mbubreyo ọdịda.
Ndị ọchịchị obodo na-emepe emepe tii na njem nlegharị anya n'ime ọtụtụ afọ.
Cao Zhang, odeakwụkwọ Pati nke obodo Liubao kwuru, "Site na ọtụtụ ndị njem nlegharị anya, 'agritainment' nke jikọtara ebe obibi, ọrụ ugbo na ịcha tii amalitela.
N'ime obodo Dazhong, ndịda ọwụwa anyanwụ nke Liubao, Liang Shuiyue, n'ezie, detụrụ uru nke njem nlegharị anya ime obodo.
Ọ na-agba ọsọ n'ụlọ nke na-ewetara ezinụlọ ya ego na-akwụghị ụgwọ.
Ego mkpokọta na Dazhong ruru yuan 88,300 ($ 13,810) n'afọ gara aga, ka agbachara ndị obodo ume ka ha mepụta ubi tii n'okpuru mmemme na-achịkọta azụmaahịa, nlekọta nkwado na ezinụlọ ime obodo.
Dazhong natara ndị ọbịa 150,000 n'oge mmemme mmiri nke afọ a na obodo ahụ bụ akụkụ nke eriri ntughari ime obodo nke ndị ikike Liubao na-agba mbọ ịrụ.
Ebumnobi a bụ imepụta “okporo ámá tii” pụrụ iche, ebe obibi ime obodo na ogige ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ maka nlegharị anya, na imepụta ihe nkiri pụrụ iche, obodo na-egosipụta àgwà dị iche iche, Cao kwuru.
Ụlọ ihe ngosi nka tii Liubao na-enye ndị ọbịa ụtọ nke ukwuu nke ihe gụnyere ibubata ihe ọṅụṅụ na-enye ume ọhụrụ na iko mmadụ.
Khani Fariba na Ishtiaq Ahmed, bụ́ di na nwunye si Iran, tụrụ anya ịhụ ịhụnanya ha na tii nwere n'oge ha gara n'ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
Na akụkụ mbụ nke narị afọ nke 20, ndị bi na-enye Liubao tii na nnu nye nwanyị a na-alụ ọhụrụ iji gosipụta ịhụnanya na-adịte aka, dịka tii si n'ugwu na nnu si n'oké osimiri pụta.
N'ime obodo Tangping dị nso, onye na-eketa ihe nketa a na-apụghị ịhụ anya, Wei Jiequn, 63, na nwa ya nwanyị Shi Rufei, 34, na-arapara n'usoro ọdịnala, gụnyere ihicha, ịsa na ịgba akwụkwọ.
Ha na-agba ogbako n'ime obodo nke ndị njem nleta nwere ike ịmụta banyere omenala tii Liubao site n'ịhụ usoro mmepụta omenala.
Shi bụ onye ndu n'inyere ndị obodo aka ịbawanye ego ha na-enweta site n'ịme tii. Shi siri ọnwụ n'ịwepụta usoro ịme tii ọdịnala ma na-ekerịta ahụmịhe ya na ezinaụlọ ime obodo.
Site na 2017 ruo 2020, mpaghara ebe a na-akụ tii Liubao dị na Cangwu county gbagoro site na 71,000 mu (hectare 4,733) ruo 92,500 mu, dịka gọọmentị ime obodo siri kwuo. A na-emepụta tii kwa afọ site na tọn 2,600 ruo tọn 4,180 n'ime afọ atọ ahụ, ọnụ ahịa mmepụta ihe karịrị okpukpu abụọ site na nde 310 ruo 670 nde yuan.
N'afọ 2025, ọnụ ahịa tii Liubao sitere na Wuzhou ga-eru ihe karịrị ijeri yuan 50, ka Zhong Changzi, onye isi obodo Wuzhou kwuru.
"Site na nke a, anyị ga-aga n'ihu ịmepụta ụlọ ọrụ yuan 100 ijeri," Zhong na-ekwu.